Axmed Hayaan oo ka hadlay khilaaf ka dhex aloosan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Zwolle & Nawaaxigeeda [WAREYSI] | YoobsanNews.com
Amsterdam Axad, 15 April: Axmed Hayaan waa xubin firfircoon oo ka tirsan Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Magaalada Zwolle & Magaalooyinka ku dhow; waxaa sidoo kale u aqoonsan inuu yahay Guddoomiyaha Guddiga Jaaliyadda xubno ka tirsan Jaaliyada oo horraantii sannadkan shir ay qabteen xilkii kaga xayuubiyey C/qaadir Cali [Nuune], una magacaabay xilkaasi Axmed Hayaan; Inkastoo Nuune uu gaashaanka ku dhiftay.
Khilaafka Jaaliyadda Soomaalida ee fadhigeedu yahay Zwolle, ayaa sababtay in Jaaliyaddu 2 garab u kala jabto; Garab aqlabiyadiisu badan tahay oo uu hogaaminayo C/qaadir Nuune & Garab kale oo uu hogaaminayo Axmed Hayaan oo ay ku jiraan shaqsiyaad ka mid ah dhalinyarada cusub & aasaasayaashii Jaaliyadda.
Axmed Hayaan, ayaa markii ugu horreeysay wareysi uu saxaafadda siiyey kaga warbixiyey waxa dhaliyey khilaafkan niyad-jabka ku riday shacabka Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda ku dhaqan & sida ay dadkii aqoonyahanada ahaa, ee isagu ka mid ahaa ay u gabeen in ay ka shaqeeyaan midnimada & isku haynta mushtamaca Soomaalida ah, khilaafkaa oo sababtay in Jaaliyadu 2 garab u kala jabto.
Axmed Hayaan, wuxuu tilmaamay in C/qaadir Cali [Nuune] oo sida uu sheegay xilkii Guddoomiyenimada ay ka qaadeen xubno ka tirsan Guddiga, inuu sabab u yahay khilaafka, isaga oo intaasi raaciyey in C/qaadir dadkii isaga wax ka dhigay ee ay wada shaqeyntu kala dhexeysay uu ka doorbiday dhalinyaro uu u arkay inuu ku daneysan karo.
“C/qaadir Nuune isaga oo dhalinyaro ah aniga & Cabbaas ayaa soo tababarnay si aan uga wada-shaqeynayo masaaliixda guud ee bulshada Soomaalida ee halkan ku dhaqan; Markii ay soo dhowaatay doorashadii la doonayey in la qabto 2017 ayeey guddigu u yeereen C/qaadir, mar iyo 2 markii uu dhagaha ka fureystay ayaa xubnihii guddigu u codeeyay in xilka laga qaado, waqti badan ayuu naga dhumiyey, 14-kii Nov 2017 ayeey aheyd in ay doorashadu dhacdo” Ayuu yiri Axmed Hayaan, wuxuuna intaasi raaciyey in C/qaadir uu tegay xafiiska diiwaangelinta [Kamer van koophandel] uuna masaxay magacyada guddigii xilka ka qaaday, isaga oo magacyadii ku bedelay shaqsiyaad uu u arko inuu ku daneysan karo.
“Markii aan Dacwad ka gudbinay ayaa Khamiistii loo yeeray, waxaa la weydiiyey sababta uu magacyadeena uga masaxay xafiiska diiwaangelinta, waxaa loo sheegay in tillaabada uu qaaday ay aheyd mid sharciga baal-marsan, ninkii ka socday [Kamer koopvan handel] wuxuu weydiiyey C/qaadir; 12 sanno ayaad ku doodeysaa inaad xilka Jaaliyadda haysay, weli ma ku fikirtay inaad dadka kale fursad siiso.” Ayuu yiri Axmed Hayaan.
“Ujeeddeenu waxey tahay ay in dadku mid noqdaan oo hal meel lagu wada afuro, qofka khilaafka wadana aan iska qabano mar dhow iyo mar dheer ba, weliba generation cusub ay yimaadaan” Ayuu yiri Hayaan.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Zwolle & nawaaxigeeda ayaa sannad walba marka la gaaro bisha Ramadaan meel qura ku wada afuri jiray maalin walba oo Sabti ah, hasse ahaatee sannadkan waxaa muuqata in 2 meelood kala kireysteen, waxaanna muuqata inuu jiro loolan & is eegasho ka dhexeysa hogaanka 2-da garab.
Previous: Jaaliyadda Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda oo dooratay Guddi cusub [SAWIRRO]
Next: C/qaadir Nuune “Mushtamaca Soomaalida [Zwolle] waxeey muujiyeen midnimo iyo isku duubni” [SAWIRRO]